ညီလင်းသစ်: သူ့ကို ပြောပြီးပြီလား
Posted by ညီလင်းသစ် au 2.2.11
အပေါ်ကလင့်လေးဖြစ်တဲ့ တောင်ပေါ်သား ဘလောက်လေးမှာလဲ
သားသမီးက မိဘကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကား မပြောဖြစ်တဲ့ အကြောင်း
ကိုရေးထားတယ်။ အတွေးချင်းဆင်နေလို့ ညွှန်းလိုက်ရတာပါ။
ကျနော်တို့ကျ အမေ့ကို ပြောရမှာ ဝန်လေးနေခဲ့တယ်။
ကိုညီလင်းသစ်တို့ကျ သားဆိုတော့ ပိုပျော်မှာပေါ့လေ.။
မေမေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ဖုန်းစကား ပြောတော့ နန္ဒာ့မေမေက နန္ဒာ့ကို စကားတခွန်းပြောတယ်။
"သမီးကို ငယ်ငယ်တုံးကလို ထွေးပွေ့ ထားချင်လိုက်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် မေမေ ဆိုပြီး သမီးကနေ ထွေးပွေ့ ထားတာကို ခံချင်လိုက်တာ" တဲ့။
"အော် မေမေရယ် သမီးနဲ့ မေမေက Atlantic Ocean ပဲခြားတာပါ။ လေယာဉ်ပျံသန်းချိန် ၈နာရီလောက်ပဲ ကြာပါတယ်။ သမီး Easter ကို သေချာပေါက် ပြန်လာပါ့မယ့်"
နန္ဒာလဲ ကျောင်းပြီးကထဲက မိဘတွေနဲ့ အပေါ်ယံ တွေ့ဆုံကြတာပဲ ရှိကြပြီး မိဘအိမ်ကို သေသေချာချာ ပြန်ပြီး အချိန်ပေး သူတို့နဲ့ မတွေ့ဖြစ်တာ ၂နှစ်နီးပါး ရှိသွားပြီ။
မိဘတွေဟာ သားသမီးတွေ ငယ်ငယ်တုံးက ကြီးပြင်းလာအောင် ကြင်နာယုယခဲ့ကြသလို သူတို့ အသက်တွေ အိုမင်းလာတဲ့အခါ သားသမီးဆီက ကြင်နာယုယမှု့၊ အသိအမှတ်ပြုမှု့ကို ပြန်လိုလား တောင့်တတ်ကြစမြဲပါပဲနော်။
မိဘနဲ့ သားသမီးမှ မဟုတ်ပါဘူး။ သတ္တလောကမှာ လူသားတွေဟာ တဦးနဲ့တဦး အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုတတ်မှုဟာ အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီပိုစ့်မှာ ဖခင်တယောက်ရဲ့ မေတ္ထာကို နွေးထွေးစွာ ခံစားလိုက်ရတယ်။
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး သမီးကို မေးကြည့်ဦးမှဘဲ ... ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီးမှ စိတ်ကူးပေါ်လာတာ ကျေးဇူးပါ ...သားကလေးဗမာလိုပြောတာ တော်တော်ချစ်စရာကောင်းမှာဘဲနော် ... ကျမသမီးတော့ အိမ်မှာလုံးဝ ဗမာလိုဘဲ ပြောတယ် ... သူမသိတဲ့စာလုံးကျရင် မေးတတ်တယ် ... ကျမသမီးလည်း အိပ်ခါနီးရင် သူနဲ့ဘယ်နှယ်မိနစ်လောက်နေပါဦး ဆိုပြီး အချိန်သိပ်ပြီး တိုးတောင်းတတ်တယ် ...ညီလင်းရေးသမျှပို့စ်တွေထဲမှာ ဒီပို့စ်ဖတ်ရတာ ကျမတော့ အကြိုက်ဆုံးဘဲ ...
အဲဒီစကားမျိုးကြားလိုက်ရလို့ ခံစားလိုက်ရတဲ့ ပီတိက ဘာနဲ့မှ နှိုင်းလို့မရဘူးနော် :)
"အဖေကလည်း အမေ့ကို ချစ်တယ်ပြောပါတယ် .. အမေကလည်း အဖေ့ကို ချစ်တယ် ချစ်တယ်တဲ့.. ကိုယ်ကလည်း သူတို့ကို ပြောပါမယ်.. ချစ်တယ်"
ရှက်ရှက်နဲ့ ၀န်ခံစရာလေးရှိတယ် အစ်ကို ရေ ကျနော်အရင်က ခလေးတွေ ဘာတွေလိုချင်စိတ်မရှိဘူးဗျ ခုတော့ အဆင့်ကျော်ပြီးတွေးလိုက်တာ ယူမယ့် ဇနီး ချစ်ရမယ့် သူမရှိပေမယ့် ကျနော် အစ်ကို့သားလေးကိုတွေ့တော့ သားလေး တစ်ယောက်လောက် လိုချင်တာတော့ အမှန်ပဲ အစ်ကိုနေရာမှာ ကျနော်ဆိုလည်း အရည်ပျော်သွားမှာပါ တကယ် ဒီပို့စ်လေးဖတ်ရတာ ကြည်နူးဖို့ကောင်းလိုက်တာ ။
အဆုံးသတ် နိဂုံလေးကတော့ တွေးစရာလေးနဲ့ ကျနော် တို့က တောသူတောင်သားတွေဆိုတော့ စကားအပိုတွေမပြောတတ်ကြဘူး ဒါမယ့် အမေ ကော အဘ ကော ကျနော်တ်ို့တွေကို တခါမှမရိုက်ဖူးဘူး ပြီးတော့ ချစ်တယ်လေး ဘာလေး ဖွဲ့၂နွဲ့မပြောပေမယ့် သူတို့တွေ ကျနော်တို့ကို အရမ်းချစ်တာ သိသာတယ် ကျနော်ကတော့ နှုတ်က မပြောပေမယ့် အမေ့ကိုတွေ့တိုင်း ဖက်တာပဲ ခုချိန်ထိလည်း အိမ်ကိုပြန်တိုင်း အမေ့နားမှာ အမေ့ကိုဖက်အိပ်တုန်းဗျး) ။
အစ်ကို တို့မိသားစုလေး ခုလို အမြဲ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနိုင်ပါစေဗျာ ပြီးတော့ သားအကြောင်းလည်း မကြာမကြာ ရေးပေးပါအုံး သူဗမာလို ပြောပုံလေးနဲ့ ခပ်လွဲလွဲအကြောင်းလေးတွေပေါ့ မျှော်နေမယ် ။
ပီတိတွေကိ မျှဝေခံစားသွားပါတယ်။ ကျွန်မသားကတော့ မေမေ့ကိုချစ်တယ်လို့ နေ့တိုင်းနီးပါးပြောတဲ့အကြောင်း ပြန်ကြွားလိုက်ဦးမယ်။ သူက စကားကို လောကြီးကြီးနဲ့ ပြောရင် အဖေနဲ့အမေက စကားကို သတိထားပြီး မထစ်အောင်ပြောဖို့ အမြဲသတိပေးရတယ်။ အဲဒါဆိုရင် သားသား သတိထားသည်ဖြစ်စေ မထားသည်ဖြစ်စေ ဘယ်တော့မှ မထစ်တဲ့စကားတခွန်းတော့ ရှိတယ် "မေမေ့ကိုသားသားချစ်တယ်" တွေ့လား သားသား ဘယ်တော့မှ မထစ်ဘူးလို့ ပြောပြတတ်တယ်။
မိဘနဲ့ သားသမီးကြားမှာ နွေးထွေးမှု လိုအပ်တာ အမှန်ပဲ။
ကျွန်မတို့လည်း မိဘနဲ့သားသမီးကြား နွေးနွေးထွေးထွေး မနေတတ်တဲ့ ခပ်ရိုးရိုး တုံးတုံး တောသူတောင်သားတွေထဲမှာ ပါပါတယ်.. တကယ်တမ်းတော့ မိဘနဲ့ သားသမီးကြား ရင်းနှီးနွေးထွေးမှုဆိုတာ တကယ်ကို လိုအပ်ပါတယ်နော မပြောရင်မသိ.. ပေမဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းဟာလည်း မိဘတွေ သားသမီးတွေရဲ့ စိတ်ကို ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစေနိုင်ပါတယ်. ဖတ်ပြီး ကြည်နူးမိပါတယ်
အစ်မကကျတော့ အဲဒီချစ်တယ်လို့ ပြောဖို့ကို ရှက်ရှက်နေသလိုပဲ..။ သားနဲ့သမီးကတော့ ပြောပါတယ်..နေ့တိုင်းလိုပဲ..။ အစ်မကတော့ သူတို့ကို တခုခု လုပ်ခိုင်းတာမျိုး ချော့တာမျိုးရှိမှပဲ အချစ်ကလေးရေ... လို့ ခေါ်တတ်တယ်..။ အဲလိုဆိုရင်တော့ ပြောကျင့်ရသား..။ အင်း မကြာမကြာ ခေါ်မှထင်တယ်နော်.. ညီလင်း..
ကျွန်တော်တို့ ခပ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဖေဖေ မေမေတွေကို ချစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးတယ်... ဒါပေမယ့် အရွယ်နည်းနည်းရလာတော့ မိဘတွေရဲ့ ကျေးဇူးကို သိပြီး အရင်ကထက် ပိုချစ်လာပေမယ့် ဒီစကားကို နှုတ်က ဖွင့်ပြောဖို့ ဝန်လေးသွားသလိုပဲ...
အခုခေတ်ကလေးတွေကတော့ ပိုပြီး တတ်လဲ တတ်လာကြတယ်... ကြီးပြင်းလာကြရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မတူတာလဲ ပါလိမ့်မယ်... သူတို့လေးတွေက အဲဒီလိုစကားမျိုးတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို အရည် မပျော် ပျော်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်...
Ree Noe Mann ...
ကျနော် သွားဖတ်ကြည့်ပါတယ်၊ ပို့စ်ကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါပဲ၊ ညွှန်းပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...၊
အဖြစ်ချင်းကတော့ တူနေပြီဗျို့၊ ကျနော်ကိုလည်း သားက ပြောပေမယ့် ကျနော်ကျတော့ အမေတို့ကို ပြောဖို့ ဝန်လေးနေခဲ့တယ်..၊
မိဘတွေက သားသမီးတွေဆီက အကြင်နာကို လိုအပ်တာ အမှန်ပါပဲ၊ အသက်ကြီးလာလေလေ ပိုပြီး လိုအပ်လာလေလေ...၊ နန္ဒာ့မေမေကို အခုလို အားပေး လိုက်တာ သိပ်ကောင်းတာပေါ့၊ ဒိထက်မက အချိန်တွေ အများကြီးပေးပြီး ဂရုစိုက်နိုင်ပါစေလို့.... ....၊
သမီးက ဗမာလိုပဲ ပြောတယ်ဆိုတော့ သိပ်ကောင်းတာ ပေါ့၊ ကလေးတွေက အများအားဖြင့် သူတို့ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံက စကားကိုပဲ အဓိကပြောကြလေ့ ရှိတာကိုး၊ Carry on sis...! :)
ဒါတော့ အဟုတ်ပဲဗျို့၊ လက်တွေ့ လက်တွေ့...၊း)
အင်း..တော်သေးတယ် ကြိုပြောထားလို့၊ မဟုတ်ရင် ဦးထုပ်နောက်ပြန်ဆောင်း၊ ဘောင်းဘီကို ကျွတ်ကျလု နီးပါးချဝတ်၊ လက်တစ်ဖက်က လက်ညှိုးနဲ့လက်သန်း ကို မျက်နှာရှေ့မှာထောင်၊ နောက်တစ်ဖက်က ဘောင်းဘီခွကြားကို ကိုင်ပြီး Yo..Yo...Yo..လို့ထည့်ပြီး ဆိုမိတော့မလို့...၊ :D
ညီ ဝန်ခံတာမိုက်တယ်၊ ချစ်ရမယ့်သူ မရှိသေးတာရော၊ အိမ်ထောင်အတွက်သာမက သားလေးတစ်ယောက် တောင်ယူဖို့အထိ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင်သင့်ဖြစ်နေ တာရော၊ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်တွေ ကိန်းအောင်း ဖြစ်တည်လာတာရော..၊ အင်း..ခဲတစ်လုံးနဲ့ ငှက်သုံး ကောင်ပဲ..ဟားဟား၊ မောင်မျိုးကတော့ အမေရဲ့ အသည်းကျော်လေး ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့၊ သားရဲ့ အလွဲလေးတွေ ရေးပါဦးလို့ hint ပေးသွားတော့ ငိုချင်ရက် လက်တို့တော့ ဖြစ်ကုန်ပြီနော်...၊ :D
Wow...သားက တကယ် smart ဖြစ်တာပဲ၊ အမတို့ ကံကောင်းတာပေါ့၊ အင်း..အမေတော့ တချိန်လုံး အရည်တွေ ပျော်နေတော့မှာပဲ...၊း)
ကျနော်လည်း ပွေ့ဖက်ယုယတာ၊ ချစ်တယ်လို့ ပြောကျင့် မရှိတဲ့ မိသားစုက လာတာပါပဲဗျာ၊ အလေ့အကျင့်ပဲ ထင်ပါရဲ့နော်၊ ခဏခဏ စာလာဖတ်လို့လည်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ခင်ဗျား...၊ :)
ဟုတ်တယ်အမ၊ ကျနော်လည်း အတူတူပဲ၊ သားက ကျနော့်ကို ချစ်တယ်ပြောပေမယ့် ကျနော်ကျတော့ အမေတို့ကို ပြန်ပြောဖို့ ဝန်လေးနေတယ်၊ သားကိုတောင် ပြင်သစ်လိုဆို ပေါ့ပေါ့လေး ပြောလို့ရ တယ်၊ မြန်မာလို ဆိုရင်တော့ မနည်း အားတင်းပြောနေ ရတယ်..၊ ဖြစ်ရပုံများ....၊
ဟုတ်တယ်နော်၊ အမပြောသလို ကြီးပြင်းလာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကြောင့်ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့၊ ပြောကျင့် မရှိတော့ ကျနော်တို့က အတော့်ကို 'နှုတ်ခိုင်'နေပြီ..၊ :(
ကြည်းနူးစွာ ဝေမျှခံစားသွားပါတယ်..း)
မြန်မာသားသမီးတွေက မိဘကို ချစ်တယ် မပြောပေမယ့်လည်း လုပ်ရပ်တွေနဲ့ သက်သေပြကြပါတယ်လို့ ထင်ပါတယ်..
You are my best Mommy, best Daddy ever (ever က ပါလိုက်သေးတယ်) တို့ Oh.. I love you so much Mommy တို့ တီတီတာတာကလေး ပြောတဲ့အခါမှာတော့ ကိုညီလင်းသစ်လိုပဲ မိဘတွေက ခဏခဏ ဖင်ထိုင်ရက် ပြန်ပြန်ကျကြရမှာပေါ့လေ..း))
ဒါမျိုးကျတော့ ကလေးတစ်ယောက်ချင်းဆီနဲ့ဆိုင်မယ်ထင်တာဘဲ....။ ပြောတတ်တဲ့ကလေးရှိသလို မပြောတဲ့ကလေးလည်းရှိမယ်..။ ပြောလာခဲ့ရင်လည်း မိဘတွေ အရည်ပျော်ကြမှာ ကျိန်းသေဘဲ.. :) ခုဘဲကြည့်ပါလား..။
အနောက်တိုင်းရုပ်ရှင်တွေမှာတော့ မိဘတွေက "I love you, I love you darling, I love you Sweetheart " လို့ပြောတာတွေ့ဖူးပေမယ့် သိပ်ခံစားလို့မရဘူး..။ မြန်မာမိဘတွေကတော့ မလေးပြောသလိုဘဲ လုပ်ရပ်နဲ့ပေါ့..။
ကျွန်တော်လည်း အမေ့ကိုအရမ်းချစ်ပေမယ့် ချစ်တယ်လို့ ပြောရမှာဝန်လေးနေတယ်.. ရှက်နေသလိုလို..။ အမေလည်း ကျွန်တော့်ကို မပြောဘူး... အမေ့လုပ်ပေးခဲ့သမျှတွေကိုပြန်စဉ်းစားမိတိုင်း.... အနားကလူတွေက မင်းအမေက မင်းကိုအရမ်းချစ်တာဘဲလို့ ပြောလာတိုင်း ကြည်နူးရတာဘဲ...။
p.s ။ သားသားပြောတဲ့စကားသံလေး ကြားတယ်တယ်ဗျို့... အရုပ်မပါလဲ..အသံလေးဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့...။ မြန်မာလိုပြောတာလေး...။
* ကြားတယ်တယ်မဟုတ်ပါဘူး... ကြားချင်တယ်လို့ပြောတာပါ * ..အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့အလောကြီးသွားလို့ပါ...။
မိဘနဲ့ သားသမီးအကြားချစ်တယ်လို့ ကျမ မိဘကို
ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးကို ပထမဆုံး အကြိမ် အလည်ရောက်လာပါတယ်။ ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာ ကောင်းလိုက်တာ။ “ ပါပါး... ပါပါးက သားသားရဲ့ အသဲတုံးကြီး ” တဲ့လား။ ကိုညီလင်းရဲ့ သားသားက ချစ်စရာလေးနော်။ စကားလည်း တတ်ပါ့။ ပို့စ် အပောာင်းတွေထဲက သားသား ဓာတ်ပုံလေး ရှာကြည့်ပြီး ချစ်ဖို့ ကောင်းလွန်းလို့ ဒီ ဘလော့ဂ်လေးကို သိမ်းထားလိုက်ပြီး) ရို့စ်မှာလည်း ရို့စ်နဲ့ အသက် အရမ်းကွာတဲ့ ဒီနိုင်ငံ ရောက်ပြီးမှ မွေးတဲ့ ရို့စ် ညီမ အငယ်ဆုံးလေး ရှိတယ်။ ဒီမှာ မွေးလို့လား မသိပါဘူး။ အသားကဖြူဆွတ်နေတား)ဒီမှာ ညီမလေး ဓာတ်ပုံလေး တင်ထားသေးတယ်။
စာလာဖတ်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျနော်တို့ မြန်မာမိသားစုတွေမှာတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဟာ 'လူပြောမသန်၊ လူသန်မပြော' ပါပဲ...၊
ကျနော်သိရသလောက်နဲ့ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ အပေါ်က ကွန်မန့်တွေ အရလည်း ပြောတဲ့သူ ရှားမယ်လို့ နားလည် ရပါတယ်၊ အနောက်တိုင်းမှာ တောင်မှ ကလေးတုန်းက ပြောကြပေမယ့် ကြီးလာတော့ "I love you, mom" လို့ ဆက်ပြောတဲ့သူ အတော်နည်းပါတယ်၊ ပြောပြော၊ မပြောပြော ချစ်ခြင်းဟာ စီးဆင်းနေရင် ပြီးတာပါပဲ...နော့၊ သားရဲ့ မြန်မာသံပါတဲ့ ဗီဒီယိုတွေ့ရင် တင်ပေးမယ်လေ...၊
Same to you အမရေ့...၊ :)
ညီမလေးရဲ့ ဓါတ်ပုံ ကျနော်လာကြည့်ပါတယ်၊ အရမ်း ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်...၊ လာလည်တဲ့အတွက်ရော၊ မျှဝေ တဲ့အတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...။
အမေကတော့ ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်မှန်း သေချာသိနေပါတယ်။
သားလေးကတော့ အခုမှစကားစပြောတာ.. ဒီလိုအချိန်လေးရောက်ဖို့ ရင်ခုံစွာနဲ့ပဲ စောင့်ရအုံးမယ်ဗျာ..
ဒီလို အချိန်တွေ အမြန်ဆုံး ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာ၊ ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် အချိန်ကုန်တာ အရမ်းမြန် တယ်ဗျ...၊ :)
တကယ်ကို ကြည်နူးရတယ်..အဖေ၂ယောက်ရဲ့ မြစ်ဖျားခံလာတဲ့ပီတိမြစ်က ကျွန်မရင်ထဲစီးဆင်းတုန်းပါဘဲ..